08/10/2018 admintriatra 0
Nisokatra omaly ny fampielezan-kevitra ho amin’ny fifidianana filoham-pirenena izay hatao amin’ny faha-7 Novambra ho avy izao. Samy nanana ny fomba nanamarihany izany ireo kandidà miisa 36, fa ny ankamaroany aloha dia namonjy Fiangonana niseho ho …Tohiny
Zava-dehibe ho an’ny vahoaka malagasy tokoa ny maha mpino kristiana ny kandidà, izay midika ho fatahorana an’Andriamanitra. Mipetraka anefa ny fanontaniana ankehitriny manao hoe: «tena mpino tokoa ve ireo kandidà milatsaka hofidiana ireo?». Mpino Katolika …Tohiny
Fenoarivo : Mpanao fanafihana 10 voasambotra
Voasambotra avokoa ireo folo lahy efa nokarohina fatratra amin’ny resaka fanafihana mitam-piadiana, vaky trano sy fanendahana ary hala-botry. Efa ny volana aogositra no nanokatra ny fikarohana ireto jiolahy mampitondra faisana ny mponina ao amin’ny faritra …Tohiny
Mpivarotra eny Mahamasina : Midongy tsy hanara-dalàna
Nanomboka tamin’ny alarobia teo dia tsy nahazo nivarotra eny Mahamasina intsony ireo mpivarotra amoron-dalana. Nisy ny fandaminana nataon’ny tompon’andraikitra amin’iny toerana iny, ka nasiana tsato-by eraka ny sisin-dalana, mba tsy ahafahan’izy ireo mivarotra eny intsony. …Tohiny